Initiative Q Review – The ọzọ nnukwu digital ego? | Gosi Top
Gịnị bụ Initiative Q?
Initiative Q bụ a ngo aiming ike ụwa ji mma ugwo usoro.
The difference between this and cryptocurrency projects is that Initiative Q has a strategy of targeting early adopters. Ọ malitere ya si mkpọsa site launching ihe agba naanị nlereanya, na malitere na-enye efep nnukwu ichekwa kaadị ka n'oge adopters.
A max of 2 puku ijeri mkpụrụ ego ga-agbala, na ebumnuche bụ otu mkpụrụ ego ga-ekwesị $1. Otu n'ime ndị isi nsogbu na ọtụtụ cryptocurrencies na-na ọ bụ enweghị doo ma ọ bụ ọrụ. Initiative Q 1st ebumnuche bụ ike a dị oké egwu uka nke ndị ọrụ na mgbe ahụ na-ewu ụwa ji mma ugwo usoro.
Initiative Q pụrụ iji cryptocurrency technology ma nke a bụ ma na-kpebiri.
Iji ọhụrụ teknụzụ, ebumnuche bụ ike kacha mma ugwo usoro, na ala ụgwọ, ngwa ngwa ịkwụ ụgwọ, mfe iji na igwu wayo free. Na-eji ihe ngwa iṅomi gị ihe na pụọ, a bụ na ha echiche nke ala nke iji. Igwu wayo na-gbochiri ha ekokwasị mkpisiaka sensọ, GPS, ese foto na microphones. Initiative Q na-chọrọ nwere ike laa azu azụmahịa, which Bitcoin does not have. Initiative Q ga-iru eru ka ndị mmadụ na-adịghị ike na-emeghe a akụ.
Ọ na-ewu ewu?
Ọ bụrụ na ị na-arụsi ọrụ na-elekọta mmadụ media mgbe ahụ ị nwere ike ugbua na-abịa gafee Initiative Q. Dị nnọọ lelee esonụ Google Trends eserese. Okwu 'Initiative Q’ bịakwasịrị okwu 'Ethereum’ on Google Trends.
Initiative Q Review – The ọzọ nnukwu oru ngo
Ọzọkwa, Initiative Q nwere dị nnọọ mara ọkwa na ha nwere ihe karịrị 2 nde ịrịba ama acha ọkụ. Ọ bụghị ihe ọjọọ n'ihi na a ụlọ ọrụ na-na-arụ ọrụ na-elekọta mmadụ media site na gburugburu May 2018.
Iji debanyere Initiative Q ị ga-enwe òkù site na onye. Ha na-ezitere gị na njikọ via email ma ọ bụ na-elekọta mmadụ media na mgbe ị debanyere si na njikọ. N'elu Debanye aha ị na Q4,945 nke kaadị.
Ọ a pyramid atụmatụ?
Na a pyramid atụmatụ, mmalite adopter invests ụfọdụ ego ma ọ bụ kaadị, na mgbe ahụ ego n'anya ụgwọ maka ezo ndị ọzọ. The n'oge adopters nweta ọtụtụ ụgwọ ọrụ na uru kpamkpam si atụmatụ, na ego si ọhụrụ investors na-ekesa na n'oge adopters. The ndị mmadụ na ala nke pyramid ndị akacha eme a na ọnwụ na ha ego karịsịa ma ọ bụrụ na oru ngo collapses. Na Initiative Q ọ dịghị mbụ ego, nnọọ na ị debanyere. Ọ bụ free na ọ dịghị ego na niile rịọrọ. Na Initiative Q, onye ọ bụla uru dị ka ọ dịghị mbụ ego aka.
Ọ akaha edebanye?
Ọ bụ akaha edebanye, dị ka ị pụrụ ịhụ site Google Trends eserese. Nke a ka malitere-akpali elu, na Google Trends nwekwara Eburu amuma na ọ bụ ewu ewu ga-anọgide na-aga na-abịa ọnwa. Ọ bụ naanị na mmalite nkebi ma nwere ogologo ụzọ na-aga. Ọzọkwa nke a abụghị ICO ebe unu na-eme ihe ego, ọ bụ free edebanye, Ya mere ọ dịghị ihe na-atụfu.
Ga Initiative Q-esote nnukwu ihe?
Ọ bụ ike ịgwa ka Initiative Q ka malitere na ọ bụ na mbụ ogbo nke amassing nnukwu ichekwa ọrụ. Ọ bụ mgbe anyị na-ahụ mgbe e mesịrị nkebi, mgbe ugwo usoro bụ mejuputa, na anyị nwere ike ikpe ma ọ bụrụ na nke a oru ngo ga-aga nke ọma. Ọ nwere a otu na njikọ Paypal otú ngo anaghị iyi ike
M nwere na ole akwụkwọ ịkpọ òkù, Ya mere, ọ na-1st abịa 1st ozi ndabere.
òkù Link: https://initiativeq.com/invite/SHLWWUw3X
The njikọ ga-akpaghị aka gbanyụọ mgbe agba oke ruru.
← Olee otú iji melite iptables iweghachi akpaghị aka na reboot na CentOS Linux? How to configure the Windows Defender Firewall for sharing drives in Docker? →
One thought on “Initiative Q Review – The ọzọ nnukwu digital ego?”
Jikọọ 56 ọzọ ndị debanyere aha